Dhirta Hemp ee Isticmaalka Daawada oo Lagu Burburiyey Almelo • Dawooyinka Inc.eu
Dhirta kareemka ah ee loo isticmaalo daawooyinka lagu burburiyo Almelo
11 Oktoobar 2018
ALMELO - Kobcinta laba dhir oo hemp sidoo kale waa mamnuuc. Xitaa haddii ay tahay isticmaalka daawada. Dini Boshoeve oo reer Almelo ah ayaa arintaan indhihiisa ku soo arkay. Warbixin kadib, booliisku waxay la wareegeen dalaggeedii loogu talagalay saliida xashiishka.
Waxay muujineysaa jirid qaro weyn oo qaawan, oo laga soo jaray dhammaan caleemaha iyo burooyinkeeda. "Tani waa murugo," Boshoeve ayaa taahay. Naxdinteeda, 68-jir deggan Goossenmaatsweg - bilowgii Nieuwstraatkwartier - waxay albaabka ka heshay laba sarkaal. Iyada oo la weydiinayo haddii ay leedahay dhir xashiishad ah. Warbixin ayaa laga helay arrintan. Waxaan tusay inaan ku koray gurigayga gadaashiisa laba geedo oo buurbuur ah. Oo waxaan ku sharaxay inaan ku sameeyay saliida xashiishka. Si loogu isticmaalo daawada. Waxay u muuqdeen kuwo aad u qurux badan, ”ayuu yidhi Boshoeve.
Almelose ayaa sidoo kale tilmaamay in loo yaqaan CBDdhirta (cannabidiol) waxay ahaayeen iyo midna THCdhirta (tetrahydrocannabidiol). THC waa walaxda firfircoon ee kor u qaadaysa dadka isticmaala. “Waxay u egtahay weed, waxay uraysaa sida cawska, laakiin ma ahan weed. Waxaan sidoo kale tusay saraakiisha in bacda ay ku jiraan abuurka. Waxay sheegaysaa inay ku saabsan tahay hemp isticmaalka daawada. ”
Dhirta la qalay
Si kastaba ha noqotee, taasi wax isbeddel ah kuma aysan sameyn saraakiisha. “Waxay ii sheegeen inay u yimaadeen inay fuliyaan maxaa yeelay waa la soo ogeysiiyey. Waxay ahayd inay la wareegaan dhirta, '' ayuu yiri Boshoeve. Waxay ku aragtay murugo in dhirta dhererkeedu yahay laba-mitir ay askartu duminayaan. Si aad markaa ula qaadato caleemaha iyo burooyinkeeda bac balaastig ah. Iyaguna iyagu ma aysan jeclayn iyagaba, ayay dhaheen.
Afhayeenka booliska Jan Thijs van Hemmen ayaa xaqiijinaya falka wuxuuna sharxayaa sababta loo qabtay labada dhir Waxaan leenahay siyaasad dulqaad leh marka laga hadlayo dhir yar, laakiin waa inaan wax ka qabanaa marka warbixin la sameeyo - ama haddii aan ogaanno lafteena Qodobka 3 ee Xeerka Opium ayaa qoraya tan. "Marka saraakiishu ma aysan haysan wax xulasho ah."
Sababta oo ah tirada dhirta hemp dhib malahan markay tahay suuxdinta. Hemmen: “Qaar badani waxay u maleynayaan in shan dhir oo hemp ah loo oggol yahay adeegsi shaqsiyeed. Taasi waa ismaandhaaf. Haysashada shan geed ama wax ka yar ayaa sidoo kale la mamnuucay, laakiin markaa ma jirto dacwad ciqaabeed. Dhirta waa lala wareegaa. Si loo nadiifiyo ismaandhaafka, waxaa wanaagsan in fiiro gaar ah loo yeesho maqaal wargeys. ”
Akhriso maqaalka oo dhan Tubantia.nl (ilo)
cannabisCBDdaawada cawskabeerista cannabis
Bilowga Faransiiska Qairos Energies wuxuu yiri waxay ku kacaysaa ku dhowaad 18,8 milyan oo u dhiganta ($ 23 milyan) ...
ий кран змішувача ayaa qoray:
26 August August 2020 ee 08: 24
Уюкую, що поділились. Я радий інформації, яку я прочитав від вас .. Waxaa ii soo baxday in wixii aan raadinayay ilaa iyo haatan ay ku jiraan warqadan, Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka helo maqaallo dhowr ah boggan, waxaan xiiseynayaa xukunkaaga kor ku xusan, aad u ra'yi dhismaha aragtidayda, waayo? maxaa yeelay waxaad ku qortay luuqad si fudud loo fahmi karo.